मानवता हराएको समाज, प्रेम गरेकै कारण नवराजले गुमाए ज्यान, नेपालि कलाकारहरु यसरि दुख पोखे भिडियो सहित – Online Nepal
May 27, 2020 478
जाजकोटका २० बर्षिय युवा नवराज विश्वकर्मा ले प्रेम गरेका कारण नै ज्यान गुमाउनु पर्यो। दलित भएर उपल्लो जातकको केटिसंग प्रेम गरेकै कारण उनि र उनका साथीले ज्यान गुमाए। यो बिषयमा के भन्छन् त सेलिब्रेटी?
अभिनेत्री केकी अधिकारी लेख्छिन्:
‘के फुर्ति लाउनु समाज भनेर ? यस्तो छ हाम्रो समाज । यो हो वास्तविकता हाम्रो । परिवर्तित समाज रे । खै जसको लागि परिवर्तन हुनुपर्ने हो उस्को लागि जस्ताको तस्तै छ, अझ ध्वस्त छ यो समाज । यही समाजको अंश भन्न नि लाज हुने । मानवता नभएको समाज । छि : !’
निर्देशक कलाकार निश्चल बस्नेंत लेख्छन्:
‘हामी चेतनसील प्राणी हौं भने आजैदेखि आफ्नो घरमा कुरा गरौं । कुरा गरौं, नामको पछी जोडिने जात को । जातले मानिसमा घृणाको बिऊ छर्छ भने यो पहिचान के काम को भयो । हामिले परिवर्तन गर्ने भनेको हाम्रो समयको समाज हो । मानिस भएर मानिसलाई नै तल्लो जात र माथील्लो जातमा तौलिने समाजले प्रगती गरेर के नै नाप्छ र ? मान्छेलाई जातले ठुलो सानो बनाउँदैन, उसको सोच, उसले गर्ने कर्मले देखाउँछ ।
उसलाई समाजले कतिको मान सम्मान दिन्छ भनेर भन्ने कुरा तपाई हाम्रै आफन्तसंग कुरा गर्न थालौं । यो जातको नाममा हुने कुरितिको घैंटो फुटाउन हामिले आफ्नै घरबाट कुराकानी सुरु नगरे आउने दिनहरुमा यस्ता घटना फेरी देख्न सुन्नु पर्नेछ । कानुन छ, कानुन पनि लाग्छ यस्तो रित अपनाउनेहरुलाई तर कानुनले कसुरवार ब्यक्तिलाई सजाय दिन सक्छ । यस्ता सोच नै बदल्न चै तपाई हामी यहि समाज भित्रका मानिसहरुले नै यहि समाजभित्रै बस्ने त्यस्ता मानिसको घैंटोमा घाम लाग्ने गरी आवाज ठुलो बनाउन जरुरी छ । समाज बदल्ने हो भने सोच बदल्न तिर लागौं’
अभिनेत्री बर्षा शिवाकोटी लेख्छिन्:
विश्व भनिनै रहन्छ, जात, वर्ग, लिङ्ग केहीको भेद भाव छैन् । तर हामी त नेपाली होनि (एक्दम फरक) । शताब्दी भन्छ २१ चरणमा पो छौं । उहीलेको कुरा नगर, तर हामी नेपाली हो नि (एकदम फरक) । प्रेम भन्छ, म अन्धो छु, मन मात्र हेर्छु तर हामी नेपाली होनि, उपहार मा मृत्यु दिन्छौं (एक्दम फरक) । खै कहिलेसम्म नेपाली होनि भनेर गर्व गर्नु !! विरोध त सधै गरिन्छ तर यस्ता घटना पनि भैनैरहन्छ । के यो सबको अन्त्य कतै छ ?हृदय देखि प्रेम गर्नु अपराध हैन, हत्या गर्नु अपराध हो’
कलाकार दिपकराज गिरि लेख्छन्:
कोरोना बाट बॉच्न के के उपाय गर्नु पर्छ त्यो त WHO , सरकार सबैले बताए!!!
आजको यूगमा पनि दलितहरू प्रेम गरेको आरोपमा मारिदै छन् यस बाट बच्ने उपाय चाहि कस्ले बताउछ होला?
Prevयी ४ राशी हुने व्यक्ति सबैभन्दा धनी हुन्छन् !!
Nextमृ*तक नवराज बिकको दिदिको बेदना, सकिएन सम्हाल्न- (हेर्नुहोस भिडियो)
सरकारलाई गगन थापाकाे चेता,वनी,संक,टमा समेत भ्रष्टा,चार गर्न नछाड्नेहरु भन्दै मागे एक एक हिसाब (भिडियो हेर्नुहोस)
भक्तपुरमा घरभित्र यस्तो अवस्थामा कुकुर सहित ३ जनाको ला$श भेटियो
Dr. KC को स्वास्थ्य अवस्था निकै नै चिन्ताजनक ! डाक्टरहरुले गरे यति ठुलो प्रदर्शन, प्रहरी हेरेको हेरै (हेर्नुहोस भिडियो)